यस्ताछन् माओबादीबाट सरकारमा सहभागी थप मन्त्रीहरु……………. – RadioMBC
Home > राजनीति > यस्ताछन् माओबादीबाट सरकारमा सहभागी थप मन्त्रीहरु…………….
४ चैत्र २०७४, आईतवार १२:००
काठमाडौं, चैत ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट तेस्रो चरणको सरकार विस्तारमा एक राज्यमन्त्रीसहित छ जना मन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। माअोवादीबाट यसअघि दुई मन्त्री सरकारमा सहभागी भइसकेका छन्। एमालेसँगको सहकार्यमा माओवादीले एक राज्यमन्त्रीसहित आठ मन्त्रालय पाएको थियो।
तेस्रो चरणको सरकार विस्तारमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीमा वर्षमान पुन, शिक्षा मन्त्रीमा गिरिराजमणि पोखरेल, कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्रीमा चक्रपाणि खनाल, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा शक्तिबहादुर बस्नेत र खानेपानीमन्त्रीमा बिना मगर नियुक्त भएका छन् भने कृषि तथा भूमिसुधार राज्यमन्त्रीमा रामकुमारी चौधरी नियुक्त भएकी छिन /
माओबादी नेता वर्षमान पुन मन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दै छन्। पार्टीको हरेक निर्णयक तहमा उनको नाम आउने गर्छ। उनी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिन्छन्। ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीबाट सरकारको नेतृत्व गर्दै मन्त्रालय जाने आकांक्षा देखाएका थिए उनले तर पार्टी नेता रामबहादुर थापाले नेतृत्व गर्ने भएपछि पछि हटेका थिए। पार्टीमा भएको सहमतिको आधारमा उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। यसअघि उनी मन्त्रीको रूपमा एक पटक मात्र सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन्। यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। ऊर्जामन्त्री बनेका पुन माओवादीको १० वर्षे जनयुद्धका सक्रिय नेता हुन्। उनले जनयुद्धमा तत्कालीन माओवादीको जनमुक्ति सेनाको डिपुटी कमाण्डरको भूमिकामा निर्वाह गरिसकेका छन्। विभिन्न आक्रमणमा नेतृत्व गरेका थिए। उनी आफ्ना शिक्षक कृष्णबहादुर महराबाट प्रभावित भएर २०४२ सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०४८ सालदेखि पूर्णकालीन कार्यकर्ता भए। त्यसपछि उनी माओवादीको तत्कालीन जनयुद्धमा सक्रिय भूमिका खेले। ०५२ सालमा जनयुद्ध थालनीको समयमा भएको होलेरी चौकी आक्रमणमा पुन राजनीतिक कमिसार थिए। २०५५ सालमा पार्टीको केन्द्रीय सदस्य हुँदै स्थायी समिति सदस्य भए। सशस्त्र जनयुद्धका बेलामा धेरै आक्रमणको नेतृत्व पनि गरिसकेका छन्। जनयुद्धको बेला पुनले पूर्वाञ्चल र राजधानीमा काम गरेका थिए। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा भने माओवादीको तर्फबाट उपत्यकामा आन्दोलन परिचालनको मुख्य नेताका रूपमा काम गरेका थिए । शान्ति प्रक्रियापछि २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी ललितपुर- १ बाट निर्वाचित भए भने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर- ९ मा गएका उनी पराजित भए। यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गृहजिल्ला रोल्पाबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका उनी निर्वाचित भए।
त्यसैगरि अर्का प्रभाबसाली नेता शिक्षामन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता मध्यका एक हुन्। पार्टीभित्र पटक-पटक अवसर पाउनेमध्येका पनि एक हुन् उनी। यस पटकसमेत उनी चार पटक मन्त्री भइसकेका छन्। पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठका विश्वासपात्र मानिन्छन्। पोखरेल माओवादी केन्द्रमा प्रभावशाली, बौद्धिक तथा कुशल संगठक मानिन्छन्। पार्टीको सचिवसमेत भै जिम्मेवारी बहन गरिसकेका छन्। पोखरेलले २०३६ सालदेखि राजनीति सुरु गरेका हुन्। तत्कालीन जनमोर्चा नेपालमा रहेका उनी पार्टी एकीकरणसँगै नारायणकाजी श्रेष्ठसँगै माओवादीमा एकीकरण प्रक्रियामा आएका हुन्। तत्कालीन एकता केन्द्र मसालको विद्यार्थी संगठनमा २०४१ सालदेखि ०४५ सालसम्म अध्यक्षसमेत भएका थिए। भने २०६२/०६३ को जनआन्दोलमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए। शन्ति प्रक्रियापछि पटक-पटक मन्त्री भइसकेका छन्।
निकै चर्चा र परिचर्चा बिचबाट वनमन्त्री बनेका शक्तिबहादुर बस्नेत नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हुन्। कर्णाली प्रदेशबाट जनार्दन शर्मालाई पछि पार्दै उनी ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । उनी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डका विश्वास पात्रका रूपमा चिनिन्छन्। यसअघि दुई पटक मन्त्री भइसकेका छन्। यसअघि ओली नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री तथा झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बननिसकेका छन्। बस्नेत गृहमन्त्री हुँदा भूकम्पपीडितको नाममा विदेश भ्रमणमा आफन्त लगेको भन्दै विवादित बनेका थिए । २०४७ सालदेखि राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेत २०५५ सालमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य भए। माओवादी जनयुद्धमा माओवादी लडाकुको डिभिजन कमिसारसमेत भए। त्यसबेला उनले जाजरकोट, सुर्खेत, दाङ, बर्दिया, डोल्पा, जुम्ला, बाँके, प्युठान, दैलेखलगायत जिल्लामा काम गरे। त्यसैगरी चक्रपानी खनाल बलदेब र बिना मगर भने मन्त्रालयकाे नया अनुभब गर्दैछन ।